Pfupi Munamato Rebetsero | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Pfupi Munamato Rebetsero
Nhasi tichange tichitarisana nemunamato mupfupi wekubatsirwa Ndiani asingade rubatsiro, kunyangwe ivo vakapfuma pane vese vachiri kushaya chimwe chinhu, uye ivo vachazogara vachida rubatsiro rwemumwe munhu kuti icho chinhu chiitwe. Rugwaro runoti hakuna munhu anogamuchira chero chinhu kunze kwekunge chakapihwa kubva kumusoro. Izvi zvinoreva kuti kunyange rubatsiro runobva kuna Mwari. Hazvishamise, nekuti iyo nyaya yehukama nemurume mupfumi, hazviite kuti mupfumi iyeye abatsire mumwe. Rubatsiro runobva kuna Mwari, Muiti wezvose.
Izvi zvinotsanangura nei Munyori wePisarema mune bhuku rePisarema 121, anodaro: Ndichasimudza meso angu kumakomo, kubatsirwa kwangu kunobva kupi. Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha, wakaita kudenga napasi. Haangatenderi rutsoka rwako kuti rugumburwe. Tarira, iye anochengeta Israeri haangakotsiri kana kuvata. Jehovha ndiye muchengeti wako; Jehovha mumvuri wako paruoko rwako rworudyi. Zuva haringakubayi masikati, Kana mwedzi usiku. Shall LORD shall LORD thee thee thee LORD thee: The: The. The The The....... Shall LORD Jehovha achakuchengeta pakubuda kwako, nokupinda kwako, Kubva panguva ino kusvika narinhi.
Mapisarema akanzwisisa kukosha kwekutarisa kuna Mwari kunyanya munguva yekushayiwa.
Vanhu vanogona kuita zvipikirwa uye, pakupedzisira, vanokundikana, asi Mwari haazombokundikani kuzadzisa zvaakavimbisa. Ichi uye zvikonzero zvakawanda ndosaka tichifanira kugara takatarira kuna Mwari kuti tibatsirwe. Munyaya ino, tichave kupa kunze kunamato kwekubatsira rubatsiro kune wese munhu anoda rubatsiro kubva kuna Mwari. Rugwaro runoti kana nzira yemunhu ichifadza Mwari, achamuita kuti anzwirwe nyasha nevanhu. Edza kugovera chinyorwa ichi nevadiwa.
Ishe Jesu, ndimi tenzi wepasi rese, ndimi Tenzi ane tsitsi, ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, munditeerere pandinodana kwamuri. Iwe ndiwe unobatsira vasina rubatsiro, uye iwe unopa simba kune vasina simba, ndinonamata kuti iwe uchandibatsira munguva yangu yekuda. Ishe, kana fungu rehupenyu rasvika pandiri, ndokumbirawo ndiwane rugare mamuri. Chinyorwa chinoti zita raIshe ishongwe yakasimba, vakarurama vanomhanyira mariri uye vanoponeswa. Baba ndinonamata kuti muchandiponesa pandinenge ndiri munjodzi huru muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndimi Mwari akatendeka. Ndiwe mutsvene weIsreal, mudziviriri weGoshen. Ndinonamata kuti mundinunure kubva mumaoko erufu nekuti ndakaisa tariro yangu mamuri, uye ndinovimba kuti muchandiponesa. Ishe Jesu, nekuti ndakanda pamusoro pake matambudziko angu ese pamusoro pako, ndapota usandirega ndichinyadziswa. Ishe ndinunurei kubva pakunyadziswa nekuzvidzwa kwevahedheni, ivo ngavasave nechikonzero chekubvunza kuti Mwari wangu aripi. Ndikomborere pane zvese kuti hupenyu hwangu huve chiratidzo. Komborerai muranda wenyu, mugondiruramisira vanodana zita renyu masikati nousiku. Ngandirege kuva chinhu chinosekwa, mambo wangu uye, muponesi.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti munzwe munamato wangu uye munzwe kuchema kwangu kwese. Dambudziko rangu rinowedzera masikati neusiku, uye vadzivisi vangu vakapika kuti havangazorori kusvikira ini ndanyadziswa. Ngavarege kundikunda; avo vanotsvaga kupunzika kwangu, ndibatsirei uye kukonzera avo vanoda ini pasi kudonhedza misodzi. Ndinunure kubva kune vanyengeri uye shamwari dzakaipa uye hukama, ndipe kukunda pamusoro pevadzivisi vangu vese muzita raJesu.
Baba Ishe, ndinoda hukuru hwemari mubhizinesi rangu. Rugwaro rwunoti ini ndinosimudzira meso angu kuzvikomo izvo rubatsiro rwangu runobva kupi? Rubatsiro rwangu ruchabva kuna Mwari, Muiti wedenga nepasi. Baba ishe, ndinonamata kuti musimuke mundibatsire, ndipeiwo masimba emari, bvisai chipuka chose nemhashu dzirikudya mari yangu, bvisai chigumbuso chose chiri kutadzisa kubuda kwemari nekundinunura pasimba rechikwereti. zita raJesu.
Ishe Jesu, ndinodana zita renyu panguva yeKutambudzika nekuti munogara muchindipindura. Ndinonamata kuti mundisunungure kubva kuvavengi vangu. Wese munhu akapika kuti handichabudirira, munhu wese akapika kutora hupenyu hwangu zvisizvo. Ishe, ndinoda kuti muvazivise kuti ndimi makamupa hupenyu uye iye chete ndiye munoda kuviga iro risina dambudziko. Ini ndinonamata kuti iwe ubvise chibvumirano chako chedziviriro pahupenyu hwevadzivisi vangu vese uye uvaite ivo panjodzi nenjodzi nerufu muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndimi murapi mukuru uye makandivimbisa kuzondiporesa kurwara kwese. Ini ndinonamatira rubatsiro rwako Tenzi Jesu pamusoro pehutano hwangu. Ini ndinonamata kuti nengoni dzenyu mubate hutano hwangu mugovhura maoko ese ehurwere pairi kuti ndisununguke kubva pakurwara nechirwere muzita raJesu.
Ishe Jesu, ini ndinoda rubatsiro rwenyu musarudzo yangu yebasa. Ndibatsireiwo, Ishe Jesu, kuti ndiende Kunze uko vamwe vakundikana nenhamo. Kune vamwe vakarambwa ndibatsireiwo kuti ini ndipembererwe. Tarenda iyo iwe Mwari yaakaisa muhupenyu hwangu kwandiri kuratidza chinangwa chehupenyu hwangu, ndinonamata kuti undibatsire kuzadzisa ivo muzita raJesu.
Baba Ishe, ndinonamatira murume nemukadzi wese vasina munhu wavanotendeukira kubatsirwa. Imi ndimi rubatsiro rwevasina rubatsiro, baba venherera, ndinonamata kuti muvhenekese mwenje yenyu uye muvabatsire muzita raJesu. Kuti nyika izive kuti ndimi Mwari, Ishe, simuka mubatsire vanhu venyu muzita rakasimba raJesu.
Previous nyayaMunamato wekuporesa Nemavhesi eBhaibheri
inoteveraKunamatira Kubatsirwa Nemari
Abel Chivabvu 19, 2021 Na7: 18 am
Ndakafadzwa nemunamato uyu. Yasvika kwandiri panguva yangu yepamusoro yekuda. Tenzi zviite zvakare utore RUDZIDZO